हाम्रो लागि प्रश्नहरु ! - Damak No.1 Online Patrika
यद्यपि यी यथार्थहरुलाई सीमित विद्यार्थीले मात्र व्यावहारिक ढंगले बुजेर आएको देखिन्छ । धेरैले बुझोस् पनि कसरी, साथीको सामाजिक सञ्जालमा दैनिक राखेको समुन्द्र तट, पार्क अनि अनेकौँ भोग विलासका रङिन् तस्बिरहरु देख्दा कस्को पो मन मान्ला ?प्रसङ्ग विदेशमा विद्या आर्जन ठिक वा बेठिक भन्ने कुरा रहेन । यो भनेको आफ्नो निजी अनुभव अनि विश्वासले व्याख्या गर्ने कुरा रह्यो । तर, विदेसी भूमिमा नेपालीको पीडा एउटा धुर्बसत्य बनेको हुँदा आज हामी साराले एकछिन मनन गरी आफूलाई प्रश्नहरु सोध्न बाध्य तुल्याएको छ ।
सर्वप्रथम, विद्यार्थी आफैँले म किन परदेश जाँदैछु, कुन विषय लिँदैछु, महाविद्यालय विश्वविद्यालयबारे मलाई के कति जानकारी छ । परामर्शदाताको मात्र भर पर्ने कि अन्य श्रोत साधन को पनि उपयोग गने भनि प्रश्नहरू सोधे हुन्छ। दोस्रोमा अभिभावक जसको कर्तव्य रहन्छ आफ्नो नानीहरुसँग अर्थपूर्ण समन्वय गर्ने अनि महत्वपूर्ण निर्णयहरु लिने । आफ्नो छोराछोरीलोई विदेश पठाउने समय कुन उचित होला नहोला भनेर थाहा पाउने कुरा विद्यार्थीभन्दा पनि अभिभावको रहन्छ । यसैगरी परामर्शदाता जसले हजारौ विद्यार्थीको सपना पुरा गर्न एउटा गहन भुमिकाखेलेको हुन्छ, उहाँहरुले व्यवहारिक परामर्श दिने हरदम प्रयास गेरकोमा दुइमत हुन सक्दैन। यद्यपी एउटा बिद्यार्थी जसले धेरै विश्वास , आशा बोकेर आएको हुन्छ, तिनीहरुलाई सहि विकल्प अनि त्यस्को सम्भावित परिणाम अझ बुझाइदिदा सुन मा सुगन्ध झै हुने थियो । यसरी नै, हामीले नेपालमा असीम जनधनको क्षति गरी पाएको गणतन्त्रबाट आएको नयाँ संविधानले मूल्यांकन गर्ने अधिकार दिएकोे रहेछ । मूल्यांकन गर्ने हाम्रो समाजले गलत मूल्यांकन गरी धेरै बौद्धिक व्यक्तिहरुलाइ विदेश जान बाध्य बनायो । यद्यपि, यही मूल्यांकनको त्रासले विदेशमा जीवन रणभूमिको मैदान जस्तो हुदाँ पनि घर फर्किने साहस धेरै कमले मात्र जुटाए ।
अन्तमा, हामीजस्तो विदेसी भूमिको रस चाखी सकेको, विद्या आर्जन सकेर अनेक अनुभवहरु बटुलिसकेको हरुलाई केहि प्रश्नहरू होला। सञ्चारमाध्यम राष्ट्र निर्माणको घटक हो यस्लाई आफ्नै निजि विज्ञापनलाई मात्र प्रयोगमा ल्याउने ? कि सत्य तथ्य अनि जीत हार को अनुभव भनि नयाँ पिडीलाई सहि मार्ग देखाउन सहयोग पुराउने ?हामीसंग यी सबै प्रश्न र उत्तर हरु होलान।
तसर्थ यस लेखलाइ आलोचना नबुझी एउटा अनुस्मारक सम्झनु हुन लेखकबाट अनुरोध छ ।
झापा सुरुङ्गाका राई हाल अष्ट्रेलियामा छन्